Abaalmarinta Neurobiology of Brain Disorders Awards waxay xallisaa dhibaatooyinka cudurada maskaxda iyo maskaxda.
Abaalmarinnadu waxay dhiirrigelinayaan cilmi-baaris loogu talagalay tarjumidda daahfurka sheybaarka ku saabsan maskaxda iyo nidaamka neerfaha ee loo adeegsado baaritaanka iyo daaweynta si loo hagaajiyo caafimaadka aadanaha. Mashaariicda iskaashiga ah ee u dhexeeya neerfayaasha asaasiga ah iyo kiliinikada ayaa la soo dhaweynayaa, sidoo kale soo jeedimaha ka caawinaya iskuxirka aasaasiga ah iyo neerfayaasha caafimaad.
Sanad walba, ilaa afar abaalmarin ayaa la bixiyaa. Abaalmarino ayaa bixiya $100,000 sanadkiiba saddex sano. Miisaaniyadda waxaa loo isticmaali karaa howlo kala duwan oo cilmi baaris ah. Looma isticmaali doono mushaharka qaataha
Waxaan danaynaynaa soo jeedinno wax ka qabanaya bayoolaji iyo farsamooyinka cilladaha neerfa iyo maskaxda. Tan waxaa ku jira soo-jeedinno siin kara aragtiyo farsamo oo ku saabsan shaqooyinka neerfayaasha ee synaptik, unugyada, molikaliga, hidde ama heerka dabeecadda ee dhammaan noocyada kala duwan, oo ay ku jiraan aadanaha iyo isku-darka iyo noolaha mooddooyinka aan wanaagsanayn. Waxaan si gaar ah u daneyneynaa soo jeedinno ku daraya qaabab cusub oo aasaasi ah iyo kuwa bixiya dariiqooyin suurtagal ah oo loogu talagalay wax-ka-qabashada daaweynta. Wadashaqeynta iyo iskuulada laga gudbiyo asluubta ayaa la dhiiri galinayaa.